Aqoonyahano & Waxgarad ku shiray Gaalkacyo oo soo dhaweeyay shirkii Istanbul – SBC
Aqoonyahano & Waxgarad ku shiray Gaalkacyo oo soo dhaweeyay shirkii Istanbul
Posted by Webmaster on Juun 3, 2012 Comments
Waxgarad iyo Aqoonyahano ku kulmay Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa ku soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay kulankii Soomaalida ugu soo gaba gabobay dhowaan magaalada Istambul ee dalkaasi Turkiga.
Waxgaradka iyo Aqoonyahanada Kulmay ayaa ku tilmaamay kulankaasi mid dan u ah umada Soomaaliyeed islamarkaana ay ka soo bexeen qodobo muhiim ah oo sida la rajeynayo wax weyn ka bedeli doonta geedi socodka nabadda Soomaaliya.
Waxa ay sidoo kale Hambayo, bogaadin iyo mahad celinba ugu direen kulankooda dowlada dalka turkiga oo kaalin weyn ka geysatay xaaladaha Soomaaliya iyadoo kala qeyb qaadatay dhinacyada Nabada, Horumarinta iyo weliba gar gaarka .
Maxamed Cilmi Faarax Waxa uu ka mid yahay Aqoonyahanadii kulanka maanta yeeshay waxaana uu sheegay in wadanka turkiga uu mahad balaaran u celinayo islamarkaana ugu baraarujinayo umada Soomaaliyeed in ay taageero buuxda ka geystaan go’aamada shirkii ka dhacay Turkiga.
Sikastaba xaalku ha ahaadee dhamaan dhinacyadii waxgaradka iyo aqoonyahanadii halkaasi isuguu yimid waxa ay isku raaceen in umada Soomaaliyeed ay u bilaabatay xaqiiqada dhabta ah ee lagu gaarayo nabad iyo horumar uu dalku gaaro.